शास्त्र भन्छ- यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस् « Arthabazar.com
शास्त्र भन्छ- यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस्
प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७६, सोमबार ०८:३३
कोरोना भाइरका कारण अहिले विश्व नै संकटमा छ । सामान्य जागिर गरेर घर
कसरी गर्ने अनलाइनबाट शेयर कारोबार ?
अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्नका लागि लगानीकर्ताले ब्रोकरकहा गई सबैभन्दा पहिले ‘केवाइसी अपडेट’ गराउनुपर्नेछ।
काठमाडौं । दैनिक र नियमित रूपमा कान समातेर उठबस गर्दा शरीरको अनावश्यक तौललाई
जागिरे हुनुहुन्छ ? लगानीकालागि यी ४ टिप्सलाई पछ्याउनुस्
अाज भोली युवाहरु कम उमेरमा नै जागिर खाने बढ्दै गएका छन । निजी